အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင် ပြောတဲ့ ”ချမ်းသာချင်ရင် အိပ်ရာက စောစောထပါ” ဆိုတဲ့စကား – MyanmarEating
အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင် ပြောတဲ့ ”ချမ်းသာချင်ရင် အိပ်ရာက စောစောထပါ” ဆိုတဲ့စကား
”ချမ်းသာချင်ရင် အိပ်ရာက စောစောထပါ” လို့အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင် က ပြောလိုက်တယ်။ဦးအောင်ရဲ့သား ကိုလူဟန်က ဘယ်လိုပြန်ပြောလည်းဆိုတော့ ”စောစောထတိုင်းသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ပဲပြုတ်သည်တွေ ချမ်းသာနေရောပေါ့” တဲ့။
အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်နဲ့ ဦးအောင်ရဲ့သား ကိုလူဟန်တို့ ပြောဖူးကြတဲ့ မတူညီတဲ့သဘောတွေပါတဲ့ စကားနှစ်ခွန်းပါ။ဒီစကားနှစ်ခွန်းကို တွေ့လိုက်ကြားလိုက်တဲ့လူတိုင်းက အဖေ နဲ့ သား ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောထားတာလေးကို သတိထားမိပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်သွားကြကုန်ရော။တစ်ချို့ကလည်း အပျော်အနေနဲ့ အဲဒီ မတူညီတဲ့ စာသား နှစ်ကြောင်းကို ပြန်Share ကြရင်း တဖြည်းဖြည်း လူသိများလာတဲ့ ပြောစရာတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်သွားကြပါပြီ။
တော်တော်များများသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဖြစ်ရပ်လေးက facebook စာမျက်နှာမှာ ဒီလောက်နဲ့ပဲနိဂုံးချုပ်တာကြာခဲ့ရောပေါ့။ဦးအောင်က ကိုလူဟန်ရဲ့ အဲဒီချေပတဲ့စကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ ဆက်ပြီး မရေးကြ မတင်ကြတော့ဘူး။
ဘယ်သူမှ ဆက်မရေးတင်ကြတော့ ဦးအောင် က ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ဖြင့်သိပ်ကိုသိချင်လွန်းတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့မထင်မှတ်တဲ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ကံကောင်းလာတော့ ဦးအောင် က ကိုလူဟန်စကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိခွင့်ရလိုက်တယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော်သိခွင့်ရလိုက်သလို သိချင်ကြတဲ့လူတွေရှိမယ်ထင်လို့ (မှတ်မိသလောက်)ပြန်ရေးလိုက်တာပါပဲ။မသိချင်ရင်တော့ ဆက်ဖတ်စရာ မလိုပါဘူး။သိချင်ရင်တော့ဆက်ဖတ်ပေါ့ခင်ဗျ။
မနေ့က အောက်တိုဘာ ၉ရက်,၂၀၁၈ ညနေပိုင်းမှာ ကျွန်တော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ခပ်ပျင်းပျင်းရှိတာ နဲ့ Mandalay FM ? ရေဒီယိုလိုင်းရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကို နားထောင်မိတယ်။နားထောင်နေတုန်း ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ တင်ဆက်သူတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဇာနည် နဲ့ မနေနေတို့က အောင်မြင်သူတွေကို တိုက်ရိုက်မေးပြီး တင်ဆက်နေတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးမယ်ဆိုတာလေးကြေညာတော့ စိတ်ဝင်တစား ဆက်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုနဲ့ နားထောင်နေရင်း ဦးအောင်နဲ့ interview စပါပြီ။interview အစပိုင်းမေးခွန်းနှစ်ခုသုံးခုကို လည်း ဦးအောင်ကဖြေအပြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုဇာနည်က စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ပြီး ဦးအောင်ကိုဆက်မေးပါတော့တယ်။” အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့သိချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ချမ်းသာချင်ရင် အိပ်ရာက စောစောထပါ” လို့ဦးအောင် က ပြောတဲ့အခါဦးအောင်ရဲ့သား ကိုလူဟန်က ဘယ်လိုပြန်ပြောလည်းဆိုတော့ ”စောစောထတိုင်းသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ပဲပြုတ်သည်တွေ ချမ်းသာနေရောပေါ့” တဲ့။ အဲဒါကိုဦးအောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောပြချင်ပါသလဲ”လို့ ဆိုပြီး မေးလိုက်တာပါ။ဦးအောင်လည်း ပြုံးရွှင်တဲ့ အသံနဲ့ ” ဒီစကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဖြေချင်နေတာကြာပါပြီ။အခုပြောချင်နေတာနဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားရတာပါပဲ ” ဆိုပြီး အစချီ ဖြေပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သိချင်နေတာနဲ့ကွက်တိဖြစ်နေတာမို့ ထခုန်မတတ်ဝမ်းသာသွားရတာပေါ့လေ။ဦးအောင်က live ဖြေပေးနေတာမို့ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ရင်း ဒီမေးခွန်းဖြေပေးတဲ့ဦးအောင်ရော မေးပေးတဲ့Mandalay FM ? က အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကိုရော စိတ်ထဲကနေ တစ်ပြိုင်ထဲကျေးဇူးအင်မတန်တင်ရပြန်ပါတယ်။အခု ကျွန်တော်က ဦးအောင် ပြောထားတာကို မှတ်မိသလောက် စာစီပြီး ပြန်ရေးပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စကားပြော အတိအကျ စာလုံးတွေက ၏ သည်မရွေး ကွက်တိမဖြစ်တာတွေ၊ အကြောင်းအရာ အရှေ့ အနောက် ရောက်တာမတူတာတွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရှိနေတာလေးတွေနဲ့ အမှားအမှန်တစ်ချို့ပါနေရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကြိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်လိုက်ပါရစေ။သေချာတာကတော့ ဦးအောင်ပြောတဲ့အတိုင်း အပိုအလိုမဖြစ်အောင် မှတ်မိသလောက် ကိုယ့်အရေးအသားလေးနဲ့ သေချာလေးကြိုးစားပြီးပြန်ရေးရတာပါ။
ဒီအခုကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Interview မှာအောင်သမာဓိရွှေဆိုင်တည်ထောင်သူ ဦးအောင် ဖြေတဲ့ အဖြေက………” ဦးအောင်က အိပ်ရာထရင် နောက်ကျတာကိုမကြိုက်ဘူး။အဲဒါကြောင့် အိပ်ရာထနောက်ကျတဲ့ ဦးအောင်ရဲ့သား ကိုလူဟန်ကို ”သား မင်းအိပ်ရာထနောက်ကျရင်ဆင်းရဲမယ်။မဆင်းရဲအောင် အိပ်ရာစောစောထ” လို့ ပြောတယ်။ဒီတော့ ကိုလူဟန်ကလည်း ခံစားချက်တွေရှိတယ်ထင်ပါတယ်။” ဟာ အဖေ ….ခင်ဗျားကလည်း အိပ်ရာ စောစောထတိုင်းသာ ချမ်းသာရင် ပဲပြုတ်သည်တွေချမ်းသာ နေရောပေါ့” လို့ ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်တာ။အဲဒီတော့ဦးအောင်က ပြန်ပြောတယ်”မင်းဘဝမှာမဆင်းရဲဖူးသေးလို့မင်းဒီလိုပြောတာ…အခုနေ ငါသာဆင်းရဲရင် မင်းလည်း ဝိုင်းလုပ်ပေးရဖို့ အိပ်ရာထဲမှာ နောက်ကျတဲ့အထိ အခုလိုမျိုးတောင်အိပ်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး……..ဒီစကားကို မင်းဆင်းရဲဖူးမှနားလည်မယ်……..ငါကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲနေရင် မင်းအခုလိုမျိုးတော့ နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး……..အဲဒီကျမှမင်းသိမှာပေမဲ့ မင်းတစ်ယောက်ကိုဆုံးမ ဖို့အတွက် ငါဆင်းရဲပြပြီးတော့မှ ငါ့သားသမီးလေးယောက်မှာ ကျန်တဲ့သမီးသုံးယောက်ကိုဒုက္ခတွေရောက်အောင် လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး……..မင်းကိုယ်တိုင်နားလည်ရမယ် ”ပေါ့။အခုတော့ ကိုလူဟန်က အဲဒီလိုလုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။အခု သူ့တပည့်တွေဘာတွေနဲ့တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။” စောစောထတိုင်းသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ပဲပြုတ်သည်တွေ ချမ်းသာနေရောပေါ့”ဆိုတဲ့စကားကလည်း အခု ဦးအောင်ရဲ့ရွှေပညာသင်တန်းမှာ သင်တန်းလာတက်တဲ့သူတွေကို ကိုလူဟန်ကအရင်တုန်းက အကြောင်းပြန်ပြောပြရင်းနဲ့ လူတွေသတိထားမိပြီး အခုမှ ပြန်တင်လိုက်ကြတဲ့စကားလေးပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀) နှစ်က ကိုလူဟန်ပြောခဲ့တာပါ။သူ့မှာလည်းအဲဒီတုန်းက ခံစားချက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။အခုတော့ သူအရင်လိုမဟုတ်ပဲ လုံးဝသေချာပြောင်းလဲသွားပါပြီ။
သူအရင်တုန်းက အဲလိုစောစောမထပဲ ဝင်လာတဲ့ဖုန်းကိုကိုင်ပြီးရွှေ ကိစ္စလုပ်မိလို့ ဦးအောင်သိန်းအစိတ်(၂၅) ရှုံးဖူးတယ်။မနက်စောစောတက်လာတဲ့ရွှေသတင်းကိုမသိလိုက်ပဲ ရွှေကိစ္စဖုန်းပြောတော့ သိန်းအစိတ်(၂၅) ရှုံးသွားရတာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဦးအာင် အပြစ်မပြောပါဘူး။သူလည်း အဲဒီနောက်ပိုင်းသိသွားတယ်လေ။ဒီတော့ အခုကိစ္စက ဦးအောင်အတွက် သိန်းအစိတ်(၂၅) ဆိုတာ သိန်း(၂၅၀၀)လောက် တန်ဖိုးကြီးသွားတယ်လ်ု့ပြောလို့ရပါတယ်။ဦးအောင်ကျေနပ်တယ်လေ။သူအသိတစ်ခုရှိသွားတာပေါ့။နောက်ဆို အမှားလုပ်ဖို့ ဆင်ခြင်မိသွားမှာပါ။
တစ်နေ့သူ့ကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့MBAသင်တန်းကို ဦးအောင်က မတက်နိုင်လို့ ၃သိန်းပေးပြီး သွားတက်ခိုင်းလိုက်တာ ပြန်လာတော့ ” ဟာ ခင်ဗျားကို ဒီတစ်ခါ တကယ်လေးစားတယ် အဖေ ” ဆိုပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ဦးအောင်ကလည်း ”’ဟာ သားအဖချင်း ဘာလို့ ထူးဆန်းပြီးလက်တွေဘာတွေဆွဲနှုတ်ဆက်တာလဲ ”’ လို့မေးတော့ ” သင်တန်းမှာ အချိန်အကြာကြီး သင်နေတာတွေက အိမ်မှာ အဖေ ဆုံးမပြောပြပြီး လုပ်ကိုင်နေတာတွေပဲ” ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်ပိုင်းသူလည်း MBAတက်ထားတော့ ဆိုင်ရဲ့Management ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တာ သူ့ကိုပဲလုပ်ခိုင်းတော့တယ်။အခုအချိန်မှာ သူနားလည်လာတော့ ဦးအောင် ကို”စောစောထတိုင်းသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ပဲပြုတ်သည်တွေ ချမ်းသာနေရောပေါ့” ဆိုတဲ့စကား နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မှားတာတွေတောင်းပန်တယ်။ဦးအောင်ကတော့ပြောတယ်”မင်းငါ့ကိုပြောခဲ့သလိုတစ်ချိန်ပြန်ခံရဦးမှာပဲ……မင်းနောက်တပည့်တွေ နောက်ထပ်လာမယ့်အငယ်တွေထဲကနေပြီးတော့မှ မင်းငါ့ကိုပြောသလို ပြောမဲ့လူထပ်ပေါ်လာမှာ……အဲဒါတော့မင်းပြန်ခံရမယ်……..ဖြေရှင်းရမယ်……..မင်းကြိုပြင်ဆင်ထားလိုက်……ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူး……အချိန်တန်ရင်မင်းလည်းပြန်ခံရဦးမှာပဲ ”လို့ပေါ့။အခုတော့ ကိုလူဟန် လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီစကားလေးက လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်က စကားလေးပါ။
ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် အဲဒီစကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အဖြေကိုရေးပြပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ အောင်သမာဓိ ဦးအောင်ရဲ့အဖြေမျှဝေမှု နဲ့ စေတနာကို ရင်ထဲ အသဲထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကြည်ညိုမိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းက တီဗီကလာတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုမှာ ပြောစကားလေးနှစ်ကြောင်းကိုအတိအကျမဟုတ်ပေမဲ့ သတိတရရှိနေပါသေးတယ်။လူကြီးအမျိုးသားတစ်ဦးကပြောတာကို လူငယ်အမျိုးသားကတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ပါ။ဒီစကားနဲ့ ထပ်တူကို သိပ္ပံမောင်ဝ ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေထဲမှာလည်း ပါဖူးပါတယ်။အဲဒီစကားနှစ်ခွန်းက”စောစော ထတဲ့ငှက် အစာတွေပိုရတယ်””စောစောထတဲ့ ပိုးကာင်ကျတော့ ငှက်အစာဖြစ်ရတယ်” တဲ့လေ။ဦးအောင်ရဲ့စကားကို ဦးအောင်ရဲ့သား ကိုလူဟန်က တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က စကားနဲ့စာသားမတူပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှုတွေတူပါတယ်။စာဖတ်သူတွေလည်း က်ုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ဆက်လက်ပြီး နယ်ချဲ့ကြပါကုန်။ကျွန်တော်ကတော့ စာတစ်ခုခု ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီကနေဆက်စပ်ပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အဆက်မပြတ်တွေးပြီး မဆုံးနိုင်တဲ့ တွေးတောခြင်းသံသရာကိုချဲ့ရတာလည်း စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အရသာကောင်းတွေ များစွာထဲက အရသာထူးတစ်ပါးလို့ ခံယူလျက်ပါပဲခင်ဗျ။ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့ အတွေးတစ်စCredit to ဆရာ အောင်ထွဋ်စံ
”ခမျြးသာခငျြရငျ အိပျရာက စောစောထပါ” လို့အောငျသမာဓိ ရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဦးအောငျ က ပွောလိုကျတယျ။ဦးအောငျရဲ့သား ကိုလူဟနျက ဘယျလိုပွနျပွောလညျးဆိုတော့ ”စောစောထတိုငျးသာခမျြးသာမယျဆိုရငျ ပဲပွုတျသညျတှေ ခမျြးသာနရေောပေါ့” တဲ့။
အောငျသမာဓိရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဦးအောငျနဲ့ ဦးအောငျရဲ့သား ကိုလူဟနျတို့ ပွောဖူးကွတဲ့ မတူညီတဲ့သဘောတှပေါတဲ့ စကားနှဈခှနျးပါ။ဒီစကားနှဈခှနျးကို တှလေို့ကျကွားလိုကျတဲ့လူတိုငျးက အဖေ နဲ့ သား ဆနျ့ကငျြဘကျပွောထားတာလေးကို သတိထားမိပွီး ပွုံးစိစိဖွဈသှားကွကုနျရော။တဈခြို့ကလညျး အပြျောအနနေဲ့ အဲဒီ မတူညီတဲ့ စာသား နှဈကွောငျးကို ပွနျShare ကွရငျး တဖွညျးဖွညျး လူသိမြားလာတဲ့ ပွောစရာတဈခုလိုတောငျဖွဈသှားကွပါပွီ။
တျောတျောမြားမြားသတိထားမိကွပါလိမျ့မယျ။အဲဒီဖွဈရပျလေးက facebook စာမကျြနှာမှာ ဒီလောကျနဲ့ပဲနိဂုံးခြုပျတာကွာခဲ့ရောပေါ့။ဦးအောငျက ကိုလူဟနျရဲ့ အဲဒီခပြေတဲ့စကားနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာပွနျပွောလဲဆိုတာ ဘယျသူမှ ဆကျပွီး မရေးကွ မတငျကွတော့ဘူး။
ဘယျသူမှ ဆကျမရေးတငျကွတော့ ဦးအောငျ က ဘာပွနျပွောလဲဆိုတာ ကြှနျတျောဖွငျ့သိပျကိုသိခငျြလှနျးတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့မထငျမှတျတဲ့တဈနမှေ့ာ ကြှနျတျောကံကောငျးလာတော့ ဦးအောငျ က ကိုလူဟနျစကားနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာပွနျပွောလဲဆိုတာ ကြှနျတျောသိခှငျ့ရလိုကျတယျ။ဒီတော့ ကြှနျတျောသိခှငျ့ရလိုကျသလို သိခငျြကွတဲ့လူတှရှေိမယျထငျလို့ (မှတျမိသလောကျ)ပွနျရေးလိုကျတာပါပဲ။မသိခငျြရငျတော့ ဆကျဖတျစရာ မလိုပါဘူး။သိခငျြရငျတော့ဆကျဖတျပေါ့ခငျဗြ။
မနကေ့ အောကျတိုဘာ ၉ရကျ,၂၀၁၈ ညနပေိုငျးမှာ ကြှနျတျောလညျး ဘာရယျမဟုတျခပျပငျြးပငျြးရှိတာ နဲ့ Mandalay FM ? ရဒေီယိုလိုငျးရဲ့တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့တငျဆကျမှုကို နားထောငျမိတယျ။နားထောငျနတေုနျး ကြှနျတျောသဘောကတြဲ့ တငျဆကျသူတှဖွေဈတဲ့ ကိုဇာနညျ နဲ့ မနနေတေို့က အောငျမွငျသူတှကေို တိုကျရိုကျမေးပွီး တငျဆကျနတေဲ့ အစီအစဉျကနေ အောငျသမာဓိရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဦးအောငျနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးပေးမယျဆိုတာလေးကွညောတော့ စိတျဝငျတစား ဆကျနားထောငျဖွဈပါတယျ။အဲလိုနဲ့ နားထောငျနရေငျး ဦးအောငျနဲ့ interview စပါပွီ။interview အစပိုငျးမေးခှနျးနှဈခုသုံးခုကို လညျး ဦးအောငျကဖွအေပွီး အစီအစဉျတငျဆကျသူ ကိုဇာနညျက စိတျဝငျစားစရာ မေးခှနျးတဈခုထုတျပွီး ဦးအောငျကိုဆကျမေးပါတော့တယျ။” အခုနောကျထပျအနနေဲ့သိခငျြတာလေးတဈခုရှိပါတယျ။အဲဒါကတော့ခမျြးသာခငျြရငျ အိပျရာက စောစောထပါ” လို့ဦးအောငျ က ပွောတဲ့အခါဦးအောငျရဲ့သား ကိုလူဟနျက ဘယျလိုပွနျပွောလညျးဆိုတော့ ”စောစောထတိုငျးသာခမျြးသာမယျဆိုရငျ ပဲပွုတျသညျတှေ ခမျြးသာနရေောပေါ့” တဲ့။ အဲဒါကိုဦးအောငျအနနေဲ့ဘယျလိုမြိုးပွောပွခငျြပါသလဲ”လို့ ဆိုပွီး မေးလိုကျတာပါ။ဦးအောငျလညျး ပွုံးရှငျတဲ့ အသံနဲ့ ” ဒီစကားနဲ့ပတျသတျပွီးဖွခေငျြနတောကွာပါပွီ။အခုပွောခငျြနတောနဲ့ ကှကျတိဖွဈသှားရတာပါပဲ ” ဆိုပွီး အစခြီ ဖွပေေးပါတယျ။
ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတျောသိခငျြနတောနဲ့ကှကျတိဖွဈနတောမို့ ထခုနျမတတျဝမျးသာသှားရတာပေါ့လေ။ဦးအောငျက live ဖွပေေးနတောမို့ စိတျဝငျတစား နားထောငျရငျး ဒီမေးခှနျးဖွပေေးတဲ့ဦးအောငျရော မေးပေးတဲ့Mandalay FM ? က အစီအစဉျတငျဆကျသူတှကေိုရော စိတျထဲကနေ တဈပွိုငျထဲကြေးဇူးအငျမတနျတငျရပွနျပါတယျ။အခု ကြှနျတျောက ဦးအောငျ ပွောထားတာကို မှတျမိသလောကျ စာစီပွီး ပွနျရေးပေးသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ စကားပွော အတိအကြ စာလုံးတှကေ ၏ သညျမရှေး ကှကျတိမဖွဈတာတှေ၊ အကွောငျးအရာ အရှေ့ အနောကျ ရောကျတာမတူတာတှေ ကနျြခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာရှိနတောလေးတှနေဲ့ အမှားအမှနျတဈခြို့ပါနရေငျ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ကွိုပွီး မတ်ေတာရပျခံတောငျးပနျလိုကျပါရစေ။သခြောတာကတော့ ဦးအောငျပွောတဲ့အတိုငျး အပိုအလိုမဖွဈအောငျ မှတျမိသလောကျ ကိုယျ့အရေးအသားလေးနဲ့ သခြောလေးကွိုးစားပွီးပွနျရေးရတာပါ။
ဒီအခုကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး Interview မှာအောငျသမာဓိရှဆေိုငျတညျထောငျသူ ဦးအောငျ ဖွတေဲ့ အဖွကေ………” ဦးအောငျက အိပျရာထရငျ နောကျကတြာကိုမကွိုကျဘူး။အဲဒါကွောငျ့ အိပျရာထနောကျကတြဲ့ ဦးအောငျရဲ့သား ကိုလူဟနျကို ”သား မငျးအိပျရာထနောကျကရြငျဆငျးရဲမယျ။မဆငျးရဲအောငျ အိပျရာစောစောထ” လို့ ပွောတယျ။ဒီတော့ ကိုလူဟနျကလညျး ခံစားခကျြတှရှေိတယျထငျပါတယျ။” ဟာ အဖေ ….ခငျဗြားကလညျး အိပျရာ စောစောထတိုငျးသာ ခမျြးသာရငျ ပဲပွုတျသညျတှခေမျြးသာ နရေောပေါ့” လို့ ပွနျပွီး တုံ့ပွနျတာ။အဲဒီတော့ဦးအောငျက ပွနျပွောတယျ”မငျးဘဝမှာမဆငျးရဲဖူးသေးလို့မငျးဒီလိုပွောတာ…အခုနေ ငါသာဆငျးရဲရငျ မငျးလညျး ဝိုငျးလုပျပေးရဖို့ အိပျရာထဲမှာ နောကျကတြဲ့အထိ အခုလိုမြိုးတောငျအိပျနနေိုငျမှာမဟုတျဘူး……..ဒီစကားကို မငျးဆငျးရဲဖူးမှနားလညျမယျ……..ငါကိုယျတိုငျဆငျးရဲနရေငျ မငျးအခုလိုမြိုးတော့ နလေို့ရမှာမဟုတျဘူး……..အဲဒီကမြှမငျးသိမှာပမေဲ့ မငျးတဈယောကျကိုဆုံးမ ဖို့အတှကျ ငါဆငျးရဲပွပွီးတော့မှ ငါ့သားသမီးလေးယောကျမှာ ကနျြတဲ့သမီးသုံးယောကျကိုဒုက်ခတှရေောကျအောငျ လုပျလို့မဖွဈဘူး……..မငျးကိုယျတိုငျနားလညျရမယျ ”ပေါ့။အခုတော့ ကိုလူဟနျက အဲဒီလိုလုံးဝမဟုတျတော့ပါဘူး။ပွောငျးလဲသှားပါပွီ။အခု သူ့တပညျ့တှဘောတှနေဲ့တောငျဖွဈနပေါပွီ။” စောစောထတိုငျးသာခမျြးသာမယျဆိုရငျ ပဲပွုတျသညျတှေ ခမျြးသာနရေောပေါ့”ဆိုတဲ့စကားကလညျး အခု ဦးအောငျရဲ့ရှပေညာသငျတနျးမှာ သငျတနျးလာတကျတဲ့သူတှကေို ကိုလူဟနျကအရငျတုနျးက အကွောငျးပွနျပွောပွရငျးနဲ့ လူတှသေတိထားမိပွီး အခုမှ ပွနျတငျလိုကျကွတဲ့စကားလေးပါပဲ။လှနျခဲ့တဲ့(၁၀) နှဈက ကိုလူဟနျပွောခဲ့တာပါ။သူ့မှာလညျးအဲဒီတုနျးက ခံစားခကျြရှိမယျထငျပါတယျ။အခုတော့ သူအရငျလိုမဟုတျပဲ လုံးဝသခြောပွောငျးလဲသှားပါပွီ။
သူအရငျတုနျးက အဲလိုစောစောမထပဲ ဝငျလာတဲ့ဖုနျးကိုကိုငျပွီးရှေ ကိစ်စလုပျမိလို့ ဦးအောငျသိနျးအစိတျ(၂၅) ရှုံးဖူးတယျ။မနကျစောစောတကျလာတဲ့ရှသေတငျးကိုမသိလိုကျပဲ ရှကေိစ်စဖုနျးပွောတော့ သိနျးအစိတျ(၂၅) ရှုံးသှားရတာပဲပေါ့။ဒါပမေဲ့ ဦးအာငျ အပွဈမပွောပါဘူး။သူလညျး အဲဒီနောကျပိုငျးသိသှားတယျလေ။ဒီတော့ အခုကိစ်စက ဦးအောငျအတှကျ သိနျးအစိတျ(၂၅) ဆိုတာ သိနျး(၂၅၀၀)လောကျ တနျဖိုးကွီးသှားတယျလျု့ပွောလို့ရပါတယျ။ဦးအောငျကနြေပျတယျလေ။သူအသိတဈခုရှိသှားတာပေါ့။နောကျဆို အမှားလုပျဖို့ ဆငျခွငျမိသှားမှာပါ။
တဈနသေူ့ကိုစီးပှားရေးနဲ့ပတျသတျတဲ့MBAသငျတနျးကို ဦးအောငျက မတကျနိုငျလို့ ၃သိနျးပေးပွီး သှားတကျခိုငျးလိုကျတာ ပွနျလာတော့ ” ဟာ ခငျဗြားကို ဒီတဈခါ တကယျလေးစားတယျ အဖေ ” ဆိုပွီး လကျဆှဲနှုတျဆကျတယျ။ဦးအောငျကလညျး ”’ဟာ သားအဖခငျြး ဘာလို့ ထူးဆနျးပွီးလကျတှဘောတှဆှေဲနှုတျဆကျတာလဲ ”’ လို့မေးတော့ ” သငျတနျးမှာ အခြိနျအကွာကွီး သငျနတောတှကေ အိမျမှာ အဖေ ဆုံးမပွောပွပွီး လုပျကိုငျနတောတှပေဲ” ဆိုပွီးတော့ပွောတယျ။နောကျပိုငျးသူလညျး MBAတကျထားတော့ ဆိုငျရဲ့Management ပိုငျးဆိုငျရာ ပွုပွငျပွောငျးလဲသငျ့တာ သူ့ကိုပဲလုပျခိုငျးတော့တယျ။အခုအခြိနျမှာ သူနားလညျလာတော့ ဦးအောငျ ကို”စောစောထတိုငျးသာခမျြးသာမယျဆိုရငျ ပဲပွုတျသညျတှေ ခမျြးသာနရေောပေါ့” ဆိုတဲ့စကား နဲ့ပတျသတျပွီး မှားတာတှတေောငျးပနျတယျ။ဦးအောငျကတော့ပွောတယျ”မငျးငါ့ကိုပွောခဲ့သလိုတဈခြိနျပွနျခံရဦးမှာပဲ……မငျးနောကျတပညျ့တှေ နောကျထပျလာမယျ့အငယျတှထေဲကနပွေီးတော့မှ မငျးငါ့ကိုပွောသလို ပွောမဲ့လူထပျပျေါလာမှာ……အဲဒါတော့မငျးပွနျခံရမယျ……..ဖွရှေငျးရမယျ……..မငျးကွိုပွငျဆငျထားလိုကျ……ဘယျလိုမှရှောငျလို့မရဘူး……အခြိနျတနျရငျမငျးလညျးပွနျခံရဦးမှာပဲ ”လို့ပေါ့။အခုတော့ ကိုလူဟနျ လုံးဝပွောငျးလဲသှားပွီ။လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈကလို မဟုတျတော့ဘူး။ဒီစကားလေးက လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈက စကားလေးပါ။
ကြှနျတျောမှတျမိသလောကျ အဲဒီစကားနဲ့ပတျသတျတဲ့အဖွကေိုရေးပွပေးခဲ့တာပါ။ကြှနျတျောကတော့ အောငျသမာဓိ ဦးအောငျရဲ့အဖွမြှေဝမှေု နဲ့ စတေနာကို ရငျထဲ အသဲထဲက နှဈနှဈကာကာ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ကွညျညိုမိပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာ ကြှနျတျောကလေးဘဝတုနျးက တီဗီကလာတဲ့ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲလေးတဈခုမှာ ပွောစကားလေးနှဈကွောငျးကိုအတိအကမြဟုတျပမေဲ့ သတိတရရှိနပေါသေးတယျ။လူကွီးအမြိုးသားတဈဦးကပွောတာကို လူငယျအမြိုးသားကတုနျ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ ပါ။ဒီစကားနဲ့ ထပျတူကို သိပ်ပံမောငျဝ ရေးထားတဲ့ စာကွောငျးတှထေဲမှာလညျး ပါဖူးပါတယျ။အဲဒီစကားနှဈခှနျးက”စောစော ထတဲ့ငှကျ အစာတှပေိုရတယျ””စောစောထတဲ့ ပိုးကာငျကတြော့ ငှကျအစာဖွဈရတယျ” တဲ့လေ။ဦးအောငျရဲ့စကားကို ဦးအောငျရဲ့သား ကိုလူဟနျက တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ (၁၀)နှဈက စကားနဲ့စာသားမတူပမေဲ့ အဓိပ်ပါယျ သကျရောကျမှုတှတေူပါတယျ။စာဖတျသူတှလေညျး ကျုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျဆကျလကျပွီး နယျခြဲ့ကွပါကုနျ။ကြှနျတျောကတော့ စာတဈခုခု ဖတျပွီးတဲ့အခါ အဲဒီကနဆေကျစပျပွီး တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ အဆကျမပွတျတှေးပွီး မဆုံးနိုငျတဲ့ တှေးတောခွငျးသံသရာကိုခြဲ့ရတာလညျး စာဖတျခွငျးရဲ့ အရသာကောငျးတှေ မြားစှာထဲက အရသာထူးတဈပါးလို့ ခံယူလကျြပါပဲခငျဗြ။ကိုယျတိုငျဖတျဖို့ အတှေးတဈစCredit to ဆရာ အောငျထှဋျစံ
Originally posted 2018-09-20 16:20:16.